Mpamatsy milina fitiliana horonan-tsarimihetsika voajanahary sy mpiorina mora vidy Organizer & Compound | YiZheng
ny Milina Rotterie Drum dia fitaovana iraisana amin'ny famokarana zezika mitambatra, ampiasaina indrindra amin'ny fanasarahana ireo akora naverina sy ny vokatra vita, ary mahatsapa ihany koa ny fanasokajiana ireo vokatra farany, ary manasokajy ireo vokatra farany aza.
Inona ilay masinina Rotary Drum Sieving?
Milina Rotterie Drum Ampiasaina indrindra amin'ny fampisarahana ny vokatra vita (vovoka na granula) ary ny akora miverina, ary afaka mahatsapa ihany koa ny fanombohana ny vokatra, ka ny vokatra vita (vovoka na granule) dia azo sokajiana mitovy.
Izy io dia karazana fitaovana fanadiovana fitaovana fanadiovan-tena vaovao. Ampiasaina be izy amin'ny fandinihana ireo fitaovana matevina isan-karazany izay tsy ambany 300mm. Manana fahombiazana avo, ambany tabataba, vovoka kely, androm-piainana lava, tsy fikojakojana, fikojakojana mora sy lafin-javatra maro hafa. Ny fahaiza-manao fitiliana dia 60 taonina / ora ~ 1000 taonina / ora. Izy io dia fitaovana mety indrindra amin'ny fizotry ny famokarana zezika biolojika sy zezika mitambatra.
Ny fanadiovan-tena Milina Rotterie Drum manatanteraka fihodinana mety amin'ny varingarin'ny fisarahana ivon-toerana amin'ny alàlan'ny rafitra fanalefahana karazana boaty. Ny varingarina fisarahana afovoany dia efijery iray misy peratra vy somary fisaka maromaro. Ny varingarina fisarahana afovoany dia apetraka miaraka amin'ny fiaramanidina ambanin'ny tany. Amin'ny fanjakana mirona, ny fitaovana dia miditra amin'ny harato varingarina avy eo amin'ny faran'ny ambony ny varingarina fisarahana afovoany mandritra ny fizotran'ny asa. Mandritra ny fihodinan'ny varingarina fisarahana, ny fitaovana tsara dia sarahina avy any ambony ka hatrany ambany amin'ny alàlan'ny elanelan'ny efijery misy ny vy fisaka annular, ary ny zavatra maditra dia misaraka amin'ny faran'ny farany varingarina fisarahana ary hoentina ao anaty milina crusher. rNy fitaovana dia omena mekanisma fanadiovana mandeha ho azy. Mandritra ny fizotry ny fisarahana, ny vatan'ny efijery dia "mitambatra" tsy tapaka amin'ny alàlan'ny mekanisma fanadiovana amin'ny alàlan'ny fihetsiky ny mekanisma fanadiovana sy ny vatana sieve, ka ny vatana sivana dia diovina foana mandritra ny fizotran'ny asa. Tsy hisy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny fitiliana noho ny fikatonan'ny efijery.
Toetra mampiavaka ny milina fitadiavana amponga Rotary
1. Fahombiazan'ny fitiliana avo. Satria manana mekanika fanadiovana lovia ny fitaovana, tsy afaka manakana ny efijery mihitsy izy io, ka manatsara ny fahombiazan'ny fitiliana ireo fitaovana.
2. Tontolo iainana miasa tsara. Ny rafitra sivana iray manontolo dia natao tao amin'ny fonon'ny vovoka voaisy tombo-kase, manala tanteraka ny fisehoan'ny vovoka manidina amin'ny fisavana sy ny fanatsarana ny tontolon'ny asa.
3. Feo ambany amin'ny fitaovana. Mandritra ny fandidiana, ny tabataba vokarin'ny fitaovana sy ny écran rotate dia tafasaraka tanteraka amin'ny rakotra vovoka mihidy, izay mampihena ny tabataban'ny fitaovana.
4. Fikolokoloana mora. Ity tombo-kase ity dia manisy tombo-kase ny varavarankely fandinihana fitaovana amin'ny lafiny roa amin'ny rakotra vovoka, ary ny mpiasa dia afaka mandinika ny fiasan'ny fitaovana amin'ny fotoana rehetra mandritra ny asa.
5. fiainana maharitra. Ity efijery fampitaovana ity dia misy vy vy maromaro, ary ny faritra misy azy dia lehibe kokoa noho ny faritra ampitan'ny efijery an'ny efijery fampisarahana hafa.
Fampisehoana horonantsary Rotary Drum Sieving Machine
Selection modely Rotary Drum Sieving Machine
Hafainganana mihodina (r / min)
Haben'ny ankapobeny (mm)
Teo aloha: Masinina fanamafisana ny onja fanoherana
Manaraka: Screener amin'ny varotra Linear
Fampidirana Inona ilay Crusher Straw & Wood? Ny Straw & Wood Crusher mifototra amin'ny fakana tombony ireo karazana crusher maro hafa ary manampy ny fiasa vaovao amin'ny fanapahana kapila, dia mampiasa fotopoto-pitsipika feno sy manambatra ireo teknolojia fanorotoroana miaraka amin'ny kapoka, fanapahana, fifandonana ary fikosehana. ...